Tag: zvemukati manejimendi | Martech Zone
Tag: zvemukati manejimendi
Volusion: Iyo Yese-mu-Imwe Ecommerce Webhusaiti Inovaka
Chipiri, January 12, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Volusion's-in-one chikuva inoita kuti zvive nyore kuita kuti chitoro chako chigadziriswe mumaminetsi. Ipuratifomu yavo inoita kuti zvive nyore kumhanyisa chitoro chako, gamuchira kiredhiti kadhi kiredhiti, stocking zvinhu kana kugadzirisa yako saiti dhizaini. Yadzo ecommerce chikuva inopa vatengesi kusimuka uye kumhanya neakanakisa mushandisi interface uye makuru maficha. Volusion's Ecommerce Builder Zvimiro: Chitoro Mhariri - Gadzirisa kutaridzika uye kunzwisisika kwenzvimbo yako nematicha akagadzirwa zvine hunyanzvi uye yedu ine simba saiti mupepeti.
Inowedzerwazve: Gadziridza chero CMS, Ecommerce Platform kana Static Webhusaiti
China, July 6, 2017 China, July 6, 2017 Douglas Karr
Inopindura bhurocha uye ecommerce saiti zvine zveazvino zvemukati zvakakosha kupfuura nakare kose. Iko kugona kwekuvandudza yako saiti haina kuganhurirwa kune zvemukati shanduko, zvakare ndeyekuenderera nekuvandudza mapeji ekutsvaga, nhare, uye shanduko. Muzuva rino nezera, zviri zvishoma zvinotyisa kuti vangangoita hafu yevatengesi vanofanirwa kubata yavo IT department kuti vaite shanduko dzekutanga kune yavo webhusaiti vhiki nevhiki - asi ichokwadi. Ayima akazivisa iyo
Maitiro Ekumisikidza iyo Ruzivo Base Solution
Chitatu, June 28, 2017 China, June 29, 2017 Douglas Karr
Masikati ano ndanga ndichibatsira mutengi akawedzera chitupa cheSSL uye ndokusiya yavo www kubva kuURL yavo. Kuti tikwanise kudzora zvakanaka traffic, isu taida kunyora mutemo weApache mune .htaccess faira. Tine vanoverengeka vevaApache nyanzvi vandaigona kunge ndakawana mhinduro iyi, asi pachinzvimbo, ini ndakangotsvaga mashoma mabhesi eruzivo pamhepo ndikawana mhinduro yakakodzera. Ini ndaisafanirwa kutaura nemunhu,
Nei Uchishandisa Drupal?
Mugovera, June 3, 2017 Mugovera, June 10, 2017 John Bhuruu
Ini ndangobva kubvunza Chii chinonzi Drupal? senzira yekuzivisa Drupal. Mubvunzo unotevera unouya mupfungwa ndewokuti "Ndinofanira kushandisa Drupal here?" Uyu mubvunzo wakanaka. Kazhinji iwe unoona tekinoroji uye chimwe chinhu nezvazvo chinoita kuti iwe ufunge nezvekuishandisa. Panyaya ye Drupal iwe unogona kunge wakanzwa kuti mamwe mawebhusaiti akajairika ari kumhanya pane ino yakavhurwa sosi yemukati manejimendi manejimendi system: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, uye iyo Nyowani